Mara ihe niile, yabụ ị nwere ike ịme ihe ọ bụla: Otu 6sense si emebi ụlọ ọrụ ABM | Martech Zone
Buyingzụta B2B agbanweela - ndị na - azụ ahịa taa bụ ndị na - amaghị aha ha, nkewa ha ma na - eguzogide ha. Mgbalị B2B Sales na Marketing na-aga n'ihu na-adịwanye ntakịrị dị ka ndị otu na-akpata ego na-alụ ọgụ maka ịmịpụ nlebara anya nke ndị ahịa na atụmanya na gburugburu ebe mkpọtụ na-arịwanye elu. Iji zoo ma merie taa, ndị otu B2B na-enweta ego ga-agbanwe ụzọ ha iji nabata ndị ahụ chọrọ ndị ahịa B2B nke oge a.
Na B2B taa na-azụ ala, ndị na-azụ ahịa bụ:
amaonye - N'ezie, ọ bụ naanị pasent 10 nke ndị ọbịa na websaịtị na-amata onwe ha.
Gbasara - na nkezi, 9.6 ndị etinye aka na mkpebi ịzụta B2B;
Na-eguzogide - 70 percent nke ire ere ere agwụla tupu gị na onye na-ere ahịa na-emekọrịta ihe
Nke a pụtara na ndị na-azụ ahịa na-achịkwa njem ahụ. Nke a nwere ike bụrụ ihe nkoropụ maka ndị otu na-enweta ego na-enweghị ike ijikọ ndị ahịa ha dị mma n'oge kwesịrị ekwesị, yana ozi ziri ezi. Eziokwu bu; ọ bụghị ndị mmadụ, ụkpụrụ omume, ma ọ bụ ọbụna nsogbu usoro - Ọ bụ nsogbu data.
Igodo nke iji dozie nsogbu a bụ iji AI na Big Data iji nye ndị otu na-enweta ego ihe osise zuru oke banyere njem nke onye na-azụ ahịa, na-enye nghọta maka ọrụ ndị a ma ama na ndị a na-amaghị. Nke a chọrọ ịkwapụ site na itinye ngwa niche ọnụ yana itinye ego na ikpo okwu zuru oke nke nwere ike ijide ma nyochaa data dị mkpa iji lebara ụzọ ndị na-azụ taa si azụ (ahaghị aha, nkewa, nke na-eguzogide ọgwụ).
Anyị nwere ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, ngwa nyocha, yana anyị gosipụtara mgbasa ozi. Site na 6sense anyị jikọtara ndị ahụ niile n'otu ikpo okwu nke na-arụkọ ọrụ n'ime mpempe dị iche iche ka anyị wee nwee nkọwa zuru oke nke ihe na-eme.
Nick Ezzo, VP nke Ọgbọ Na-achọ, Sage Intacct
Asọmpi na Imeri na 6sense
Ezubere 6sense maka ndị otu ahịa na Azụmaahịa dabere na akaụntụ nke oge a, na-enye ha ikike ikpughe omume ịzụ ahịa na-enweghị aha, dozie oge na mmefu ego dabere na akụkọ na ahịa, ma merie ndị na-azụ ahịa na-eguzogide ọgwụ site na imezu ahaziri onwe ha, itinye aka na ọtụtụ ọwa n'ọtụtụ.
Ikike ịnakọta, jikọọ ma jiri uru nke Ahịa Ndị Ahịa bụ isi ihe na-aga nke ọma ABM. Ọtụtụ ndị na-achọ teknụzụ ABM na-amalite site na ịjụ ihe ngwaahịa ma ọ bụ ikpo okwu nwere ike ịme; ihe bụ mbara atụmatụ set. Ha kwesịrị ịjụ otu esi eji Data Insight Customer eme ihe iji kwado ma mee ka ikike ndị ahụ nwee ike. Ma ọ bụ ezie na anyị kwenyere na 6sense ga-emesịa wepụta atụmatụ zuru oke nke gafere Ọrịre na Ahịa, a ga-ewukwasị ntọala ahụ na AI-Driven Customer Insights, ma ọ bụ na ọ dịghị nke mgbịrịgba na whistles pụtara ihe. Ọ bụ ya mere mkpado anyị ji amalite Mara Ihe niile - ebumnuche anyị bụ itinye ike nke AI na Big Data n'azụ ndị ahịa na ọrịre ọ bụla n'ihi na ọ bụrụ na anyị mee nke ahụ, anyị kwenyere na ha nwere ike 'Mee ihe ọ bụla (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ).
Latane Conant Chief Marketing Marketing na 6sense
Ebumnuche nke ABM bụ ime ka ebumnuche, usoro iheomume na nhazi onwe onye ka mma. Nke a chọrọ foto zuru oke nke njem ịzụ ahịa onye ahịa gị, gụnyere ọrụ na-enweghị aha nke bụ ugbu a imirikiti njem njem B2B. 6sense kpọrọ nke a gị Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị.
6sense Ndị ahịa na-eji ikpo okwu iji mee ka mgbalị ABM ha dị irè, na-eme ọtụtụ okwu ojiji n'ofe ahịa na ire ere.
Ihe akaebe dị na nsonaazụ maka ndị ahịa
Ndị ahịa 6sense na-erite uru nke AI-based Account based Orchestration, na nsonaazụ dị ka 40% + mmụba na ohere, nnabata azụmahịa buru ibu, ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na ọnụego mmeri dị elu. Otu ndị ahịa dị otú ahụ bụ PGi, onye ndu uwa na mmekorita. PGi kwesịrị ịma
Etu esi amata ndi iche n’ahia ahia
Etu esi elekwasị anya na mbọ ABM ha na akaụntụ dị mkpa
Etu ị ga - esi hụ na mmezi dị n'etiti ahịa na ọrịre
Iji 6sense ha nwere ike ilekwasị anya na mbọ na akaụntụ 'n'ahịa' wee nye nghọta oge na Ahịa iji hụ na usoro ziri ezi na ozi ruru atụmanya mmalite nke usoro ahịa ahụ. Nke a rụpụtara na a 68 percent abawanye na oge-na-na kọntaktị, a 77 percent abawanye na mmeri udu, na 9X abawanye na nkezi ndibiat size.
Ndị ahịa 6sense nwekwara ike ịchekwa ozi ha dabere na ihe ndị ahịa na-eche n'ezie ma na-arụsi ọrụ ike nyocha. Mgbasa ozi, ahịa nwee n'elu ikpo okwu ndú na Evolved ere ™, chọrọ ka iwelie mma na nke ukwu nke akụkọ na-abịa ha na ebe nrụọrụ weebụ. Ha chọrọ ịma:
Kedu ndekọ ndị na-abịa na weebụsaịtị ha n'amaghị ama, na ndị na-achọ ngwọta ha ma ọ bụghị ịga na weebụsaịtị ha - aka kpughee ụlọ ọrụ ha Dark.
Kedu isiokwu ndị na-edekọ akụkọ dị mkpa na nlekọta ahịa banyere dabere na akara ebumnuche
Etu esi akwado mmemme ABM ha ka ha ruo akuko nke oma
Kedu ndị mmadụ iji zube mgbasa ozi ngosipụta ABM ha
Site na ikpughe Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ha na nghọta nghọta omume dabere na ebumnuche ebumnuche, Mediafly nwere ike lekwasị anya na mgbasa ozi ngosi ABM na akaụntụ ziri ezi na personas, na-ebute 10X nnukwu pịa-site na ọnụego na mkpọsa ahaziri iche. 10X na abawanye na ohere inbound.
Ndị ahịa na ndị ahịa na-achọ iji ụzọ iji nweta nnabata na ịba ụba nke ọma ABM kwesịrị ịtụle Ihe Nlekọta 6sense Account based Orchestration Platform, Kwadoro site na AI, kama ịkọkọta data ebumnuche, data nke atọ, ABM gosipụtara teknụzụ mgbasa ozi, yana nchịkọta. Ihe omuma nke AI mere ka uzo ihe 3sense weputa ihe ziri ezi nye onye kwesiri ya n’oge kwesiri ya ma nye ya ihe ngosi n’ime njem nke onye zuru ya - karia ihe nke n’eme n’enweghi aha nke otutu ndi B6B Sales and Marketing.
Ekwetaghị ya? Bido ikpuchita oghere gị gbara ọchịchịrị ugbu a!
Tags: abmahia dabere na ahịab2bazụmahịa na azụmahịaoji oji
Jifflenow: Kedu otu Platform Automation Platform si emetụta Mmemme ROI